Izay niseho androany teto #Madagascar #m0206 kianja #13Mai | GAZETY_ADALADALA
Izay niseho androany teto #Madagascar #m0206 kianja #13Mai
Posted on 02/06/2012 by gazetyavylavitra
Filohan’ny Antoko Avotra Ho An’ny Firenena nitarika ny hetsika androany teny an-kianja
Vahoaka nilamina raha ny teny am-piandohana no tazana teo amin’ny akaikin’ny fefin’ny Hotel de Ville. Somary mbola vitsy ny olona tamin’izay fotoana izay. Tsy nijanona teo nefa ireto olona vitsy ireto fa nentin’ireo mpitarika avy ao amin’ny Antko Avotra ho an’ny Firenena ho eny amin’ny Tsangambato RALAIMONGO.
Rehefa tonga teny amin’ny tsangambato Ralaimongo dia nanomboka ny fandraisam-pitenenana nanoloana ireo olona nanaraka azy. Nitombo miandalana ny isan’ireo mpanotrona.
Tsy nitsahatra ny nihodinkodina sy nivezivezy ty koa anefa ny fiaran’ny EMMO, ary nandritra ireny fihodinana ireny no efa nijereny ny làlana sy ny paika rehetra hirotsahana an-tsehatra
Tampoka teo tokoa ary dia nisangodina somary nanisy elanelana ny fiara roa voalohany ny EMMO, ary nirotsaka tampoka hisambotra ireo nilanja ny megaphone sy haka ny sora-baventy nahantona tamin’ny sisin’ny zaridaina teo akaiky teo. Nahay niala anefa iretompiteny sy mpitarika ary ny mpilanja fitaovana, ka natsipiny tnay anaty fefy ilay megaphone. Tsy nisy ny fisamboarana olna tamin’io fotoana io, fanirodorodo nihanika ny fefin’ny zaridaina, toy ireny NINJA amin’ny horonantsary ireny ny GSIS naka ilay megaphone sy nanala ny sora-baventy. Nilamina indray taorian’io.
Minitra vitsy taorian’izay dia niverina indray ireo mpitarika ary nilaza tamin’ireo vahoaka fa tsy hihemotra intsony ary na ho faty eo amin’io kianja io aza dia tsy hiala. Hoy indrindra mantsy ny teny tamin’izay hoe: Raha tonga hisamboatra ahy ry zareo dia aza sakanana fa omeo làlana, Aleo maty ho fanavotana ny firenena, toy izay maty ho amin-javatra hafa.
Tafiditra tao anatin’ny fitakiana avokoa moa na ny resaka fanofakafana ireo haino aman-jery nakatona, na ny tranga Free FM, na ny fifidianana.
Nanome 36 ora ho an’ny mpitondra sy ny tafika ireto mpitarika mba handraisany ny andrikitra manandrify izao hetsika izao, fa raha tsy izany hoy izy ireo dia ny vahoaka no handray ny andraikiny, ka ampian-tafika, tsy ampiana tafika. Nanao antso ihany koa izy ireo ny amin’ny hisian’ny fitokonana faobe manomboka ny Alatsinainy izao raha toa tsy misy izay fandraisana andraikitra izay. Ho hatraiza ny tohiny? Eo mahita izy…
Ho hatevenina arakaraka ny vaovao ity lahatsoratra ity, fa ndeha aloha ianao ho entiko hijery ireo sary nalaina teny an-toerana hatramin’ny 2 ora tolakandro teo. Ato no misy azy
Fa ho an’ireo maika dia ireo ny sombiny.
Filed under: anao ny fitenenana, fandrianmpahalemana, fiaraha-monina, fifidianana, haino amanjery, politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: #avotra, #m0206, #Ralaimongo, kianja #13Mai, Madagascar, Otrikafo |
« #USEmbassy sy ny sehatra fanabeazana Firehetana tao amin’ny BFV/SG Antaninarenina »
Naina, on 06/06/2012 at 9:04 said:
Mba hiteny ihany aho raha mba misy mihaino na misy mamaky. Mba atao hoe matihanina @ resaka serasera ihany ry Lalatiana sy Fidele ao @ free FM fa misy lesoka. Tokony haka akama no hatao rf hita fa tsy mahazaka ol fa tsy sady hamely ny mpifanandrina no mitsipaka an dry zanak’i dada. Ry magro tokony mba antsoina hanohana no haratsiana indray. Mampihomehy ilay izy fa i RAvalo sy ny ekipany izay hitan’ny rehetra fa be mpanaraka aloha hatreto no tokony alaina akama fa ry zareo iny koa no enjehina indray!!!!
Mba mahaiza manao clientélisme farafaharatsiny rf hanao politika ihany. Misaotra ny rehetra namaky